Sina: Olaimpika Maitso sy Mpilalao sarimihetsika ho masoivoho mpiaro ny tontolo iainana eo anivon’ny ONU · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Mey 2008 20:11 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, Deutsch, عربي, বাংলা, Shqip, Español, English
Dan Beekman ao amin'ny ” Blogging Beijing” no manolotra fampivondronana ireo olan'ny tontolo iainana misy sy izay mbola azo antenanadonne ao Beijing. Nanadihady Fikambanana tsy miankina (ONG) sy mpitarika mpianatra izy momba ny Green Olympics (Lalao Olaimpika maitso), iray amin'ireo teny faneva telo noraisina mandritry ny lalao amin'ity taona ity. Niresadresaka tamin'ingahy Wu Dengming, avy amin'ny toeram-pamokarana angovo miaro ny tontolo iainana ao Chongging, afovoan'i Shina koa izy tsy ela akory izay.
Gaoming Jiang filoha mpitarika ny UNESCO dia niresaka momba ny olana lehibe amin'ny lafiny rano sedrain'i Beijing tao amin'ny China Dialogue. Maro ireo lalandrano ao Beijing no sempotry ny loto (fifangaroan'ny fanafody fampiasa amin'ny fambolena sy ny diky mihitsy aza), ary tsy fahampian-drano goavana. Toy ny fijerin'ny manam-pahaizana manokana mihitsy ny azy amin'ny resaka fanadiovana, miaraka amin'ny fehinteny farany,
Ao amin'ny Treehugger, i Alex Pasternack no mitondra fanamarihana mikasika ny fanapahan-kevitry ny Fandaharan'asan'ny firenena mikambana ho amin'ny fampandrosoana (PNUD) hametraka Olo-malaza Sinoa ho masoivohon'ny Tsara Sitra-po mba hanondrotra ny tontolo iainana. Ilay mpilalao sarimihetsika Zhou Xun namiratra tao amin'ny Balzac sy ilay Sinoa kely mpanjaitra (Balzac and the Little Chinese Seamstress) sy ilay horonantsary Sinoa ny reniranon'I Suzhou. Hoy izy …